Galaxy Watch Active 2: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Rehefa afaka herinandro maromaro misy fivoahana isan-karazany ary tsaho, ny Galaxy Watch Active 2 dia efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy. Samsung dia mamela antsika amin'ny taranaka faharoa amin'ity famantaranandro ity, taorian'ny nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny volana febroary tamin'ity taona ity miaraka amin'ny Galaxy S10. Sehatra izay manampy ny orinasa hanatsara ny varotra amin'ity sehatry ny tsena ity. Ka tsy mahagaga raha tavela amin'ny taranaka faharoa isika.
Ny Galaxy Watch Active 2 dia mamela antsika hanana asa vaovao, tahaka ny vinavina tato ho ato. Samsung dia manatsara ny famantaranandrony amin'ny fiasa vaovao, izay mahatonga azy io ho safidy feno indrindra amin'ity lafiny ity. Indrindra eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia misy ny fanatsarana amin'ny smartwatch.
Ny endrika dia novaina kely tamin'ity lafiny ity, miaraka amin'ny fampidirana ny bezel mikasika (Touch Bezel ho an'ny Samsung), izay manolo ilay mihodina hitantsika tamin'ny volana feb. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka mivezivezy amin'ny interface amin'ny alàlan'ny fikasihana ny sisiny, fa tsy mila manao azy akory. Raha tsy izany, tsy misy fiovana lehibe famolavolana. Araka ny efa navoakan'ny teo aloha, ity taranaka ity avoaka amin'ny habe roa koa izy io amin'ny sehatra samihafa.
Fantatr'i Samsung fa namela fahatsapana tsara ireo mpampiasa voalohany. Noho izany, ny marika Koreana dia mitady hitazona ireo singa izay niasa tsara tamin'ity famataranandro ity, hoankoatry ny famelana anay hanana asa vaovao momba ny fahasalamana mitovy amin'izany. Mahatonga an'ity Galaxy Watch Active 2 ity ho safidy tena feno amin'ity sehatry ny fiambenana ara-panatanjahantena ity. Ireto avy ireo antsipiriany feno:
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe amin'ity Galaxy Watch Active 2 ity dia ny fampidirana ny electrocardiogram ao. Apple no voalohany nampiditra an'io endri-javatra io tamin'ny famantaranandrony tamin'ny taon-dasa. Misaotra an'izany fa azo atao ny mandefa ny filan'ny herinaratra any am-po, hahazoana famakiana lalina ary hahafahana mamantatra anomalie, toy ny arrhythmia mety hitranga. Ny olona sasany dia voavonjy tamin'ity fampisehoana ity.
Amin'ny lafiny iray, hitantsika koa ny detector fall, izay niditra noho ny haingam-pandeha an'ny famantaranandro. Izy io dia manana fahaizana mamantatra raha misy latsaka tampoka na mibontsina. Raha ilaina dia manana ny fahaizana mampahafantatra ny tranga maika ianao. Fampiasana tsara, izay ahafahan'ny mpampiasa miambina ity famantaranandro ity. Nahita famantaranandro ara-panatanjahantena izahay, izay manana fahaizana manara-maso tanana amin'ny fampihetseham-batana mihoatra ny 39. Ho fanampin'izany, ireo fiasa vaovao ara-pahasalamana dia mamela ihany koa fandrefesana na fanarahana ny adin-tsain'ny mpampiasa. Raha avo lenta dia asaina manao fanazaran-tena misaintsaina.
Ny Galaxy Watch Active 2 dia natomboka tamin'ny kinova roa teny an-tsena, arakaraka ny habeny. Izahay dia manana kinova misy efijery 1,4-inch sy tranga 44mm, ny lehibe kokoa amin'izy roa. Raha misy ny faharoa izay manana efijery 1,2-inch ary ny tranga misy azy dia 40 mm ny savaivony amin'ity tranga ity. Ny mpampiasa dia afaka misafidy amin'izy roa, na dia mitovy aza ny pitsony amin'ny tranga roa, ny haben'ny habaka ihany no miova.
Samsung dia efa nanambara ny vidin'ireto kinova amin'ny Galaxy Watch Active 2. Ka fantatray izay antenaina amin'ity lafiny ity aminao. Ireto misy vidiny arakaraka ny habeny:
Ny maodely 40mm dia misy vidiny $ 279,99 (250 euro eo ho eo no hanovana)
Ny kinova amin'ny famantaranandro misy sarany tranga 44 mm $ 299,99 (268 euro eo ho eo no hanovana)
Voamarina fa ho vitantsika izany boky manomboka ny 6 septambra. Raha any Etazonia dia havoaka amin'ny 27 septambra io, mbola tsy fantatsika ny datin'ny famoahana azy tany Eropa. Noho izany, antenainay vetivety ny angona momba an'io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Galaxy Watch Active 2: ofisialy ny famantaranandron'i Samsung vaovao